Myanmar ပေါ်က Sanctions တွေ Lift ပေးမှာလား..? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » Myanmar ပေါ်က Sanctions တွေ Lift ပေးမှာလား..?
Myanmar ပေါ်က Sanctions တွေ Lift ပေးမှာလား..?
Posted by kai on Dec 3, 2011 in Politics, Issues, Think Tank | 14 comments
(ယူအက်စ်၊ ဥရောပ တို့ကနေ..) မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ တရုတ်ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတဲ့သတင်း ဖတ်ရပါတယ်..။
Myanmar ပေါ်က Sanctions တွေ Lift ပေးမှာလား..? ဆိုပြီးတော့ Sanctions ကိစ္စဦးတည် ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါတယ်.။
ကြားထဲ.. မြန်မာပြည် စူပါပါဝါ(အမေရိကား)နဲ့.တရုတ်ပြည် ကစားတဲ့ကြား ညပ်နိုင်သလားလည်း.. ဖြည့်ရေးသွားချင်တာပါ..။
အဲဒါ.. နည်းနည်း ဦးနှောက်တွင်း မုန်တိုင်းဆင်ကြည့်မလားလို့..။
Sanctions ဖယ်ပေးမယ်ဆို.. ဘယ်တော့လောက်လည်း..။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလည်း..။
လူထုအနေနဲ့.. ဘာတွေလုပ်ရမလည်း..။ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလည်း.. စသဖြင့်ပါ..။
လောလောဆယ်တော့.. အမေရိကပြည်ထောင်စုရဲ့. စတုတ္ထအကြီးဆုံးဝန်ထမ်းရာထူး( အစိုးရအဖွဲ့ တတိယအကြီးဆုံးရာထူး) ရှင် ဟီလာရီကလင်တန် သွားထားပါတယ်..။
သူမက.. အီးလဲဗာန်းမီဒီယာသတင်းအရ အောက်ကအတိုင်း ပြောထားပါတယ်တဲ့..။
“ကျွန်မအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့တာကတော့ လုံလောက်တဲ့ တိုးတက်မှုများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းဖို့ ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒါကို ဆွေး နွေးဖို့ရာ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အခုမှ စတုန်းရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွှတ်ပေးတာကို မြင်ချင်ပါတယ်။ လေးနက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ကျွန်မတို့ မြင်ချင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူတွေနဲ့သာမက ပြီးခဲ့ တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း ကျွန်မတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေကပါ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှုကို ရုပ်သိမ်းခြင်းဟာ စီးပွားရေးကို အကျိုးရှိစေပေမယ်လို့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ဖို့ လည်း လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို လူအနည်းအကျဉ်းသာ ခံစားရတာထက် လူအများစု ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
ဒီရက်ပိုင်းထဲ..သဘာဝဓါတ်ငွေ့ထွက်နေတဲ့ မြန်မာရေပိုင်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နည်းနည်းပြဿနာလုပ်ဖူးတဲ့.. သူတို့လူဦးရေလျှံထွက်နေတာကို.. မြန်မာပြည်ဖက်ပို့လိုဟန်ရှိတဲ့.. ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံက.. ၀န်ကြီးချုပ်.. မြန်မာပြည်သွားဖို့ရှိပါတယ်.။
ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သွားဖို့ရှိပါတယ်.။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ အမြင်တချို့ ပြန်ထင်ဟတ်နိုင်ဟန်ရှိတဲ့.. ဗကပရဲ့ ပြောေ၇းဆိုခွင့်ရှိသူ ဖိုးသံချောင်းပြောတာကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး..။
အခုလို ဒုတိယစစ်အေးစစ်ပွဲပြန်စတာမှာ ဗမာပြည်လည်းပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ စစ်ဦးဘီလူးနဲ့တွေ့သွားနိုင်တယ်ဆို တာလည်း သတိထားသင့်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ကြားနေ၀ါဒ၊ ပြည်တွင်းကပြည်သူလူထုအပေါ် တည်တံ့ဖြောင့်မတ်စွာကျင့် သုံးပါမှ ဒီတကွေ့ကိုဘေးမသီရန်မခကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ သူအိမ်မှာတွေ့ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တော့.. အောက်ကအတိုင်း ပြောထားပါတယ်.။ (Eleven Media Group ကပဲကူးပါတယ်)
”ဟီလာရီအနေနဲ့ နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးတွေ ၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရာမှာ အမေရိကန်ရဲ့ ခြေလှမ်းအစတွေဖြစ်သလို နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ နားလည်မှု၊ ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ ဆက်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်က အမေရိကန်က ကျွန်မတို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဂိတ်ပေါက်တစ်ခုပဲ။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ဖော်ဆောင်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့ မျှော်လင့် တယ်။ ကျွန်မတို့ အကူအညီတွေ လိုပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အပါအ၀င်ပါ။ နိုင်ငံမှာလိုအပ်မယ့် နည်းပညာတွေအတွက် ပံ့ပိုးမှုတွေမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွေလိုမျိုး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ လိုတယ်။ ယုံ ကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့ အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံကျလှတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းအရ နောင်မှာနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တရားဥပဒေစိုး မိုးရေးပိုင်းကို အထူးဂရုပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ အများကြီးပါ ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ သာတူညီမျှရှိစေမယ့် ခံစားခွင့်တွေ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေကိုလည်း အလေးထားစဉ်းစားကြဖို့ မျှော် လင့်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ အခိုင်မာ ယုံကြည်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို အစိုးရသစ်၊ အမေရိကန်သာမက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အ စည်း၊ အတိုက်အခံ ၊တစ်ကမ္ဘာလုံးက တူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ တန်ဖိုးတွေ သာရှိမယ်ဆို အားလုံးလက်တွဲပါဝင်ကူညီကြဖို့ လိုတယ်။ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မကွေ့ဘူးဆိုတာ။ ပြီးတော့ တရုတ်နိုင်ငံ အရေးကိစ္စပါ။တရုတ်က ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သလို ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံ ရေးတွေ ဆက်ရှိနေဖို့လည်း ကျွန်မမျှော်လင့်တယ်”
Foreign Ministry spokesman Hong Lei says China welcomes Burma’s apparent warming towards the United States, as Secretary of State Hillary Clinton makesalandmark trip to the southeast Asian nation.
Ataregular briefing Thursday, Hong also pointed to one concrete action Washington could take – lifting sanctions on Burma.
Hong says China believes that what he referred to as “relevant countries” should lift sanctions on Burma to promote that country’s stability and development.
Despite the Chinese government’s official welcoming of U.S.-Burma rapprochement, Chinese media and experts have accused Washington of using Burma as part ofastrategy to contain China.
John Blaxland isaformer Australian military attache to Burma. He says China’s role as Burma’s big brother cannot be underestimated.
“China obviously hasavery important role to play in the future of Burma, and the Burmese recognize that, but they need some wiggle room,” said Blaxland. “They’re concerned, I believe, that they don’t want to be too beholden to the Chinese.”
He adds that the military relationship with China is the most important one that Burma has. He says China supplies most of Burma’s military equipment and the two countries have close military exchange programs.
ဗမာပြည်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံ ခြားရေးပေါ်လစီနဲ့ နိုင်ငံတကာအ၀န်းအ၀ိုင်းအကြားလှုပ်ရှားမှုတို့အကြောင်းတွေ ကမ္ဘာအနှံ့အများအပြား ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒါဟာဗမာပြည်ကြံ့ဖွတ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုဖြစ်စေမလား၊ ဗမာပြည်မြေ ပေါ်မှာ အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ခတ်ကြလို့ ဗမာပြည်မြေဇာပင်ဖြစ်တော့မှာလား စတာတွေလည်း အမျိုးမျိုးကြားနေကြ ရပါတယ်။
အခုတချီဟာ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝါဒပြောင်းလဲတာဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမဲ့ အမေရိကန်ဘက် ကတော့ သဘောထား ပြောင်းလာတဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့နေရပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရကို မုန်လာဥပစ်ပေးလိုက် ပြန်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (သိုးဆောင်းစကားပုံမုန်လာဥနဲ့တုတ်ပေါ်လစီကို ညွှန်းတာပါ)။ ဒီနေရာမှာကြုံတုန်းဖြတ်ပြောသင့် တာတခုက ဗမာပြည်ကစစ်အစိုးရတွေလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အစိုးရတရပ်အဖို့ နိုင်ငံတကာ့နယ်ပယ်မှာ ရွေးစရာ သိပ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အခုသမိုင်းအကွေ့မှာလည်း အမေရိကန်ဘက်ကလှည့်ပြောင်းချင်မှသာ လှည့် ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်က န၀တ-နအဖစစ်ဗိုလ်တွေလက်ထက်ကစလို့ ဗမာပြည်ကစစ်အစိုးရ တွေဟာ အမေရိကန်နဲ့အဆင်ပြေချင်တာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဗိုလ်အောင်ကြီးကိုတိတ်တိတ်စေလွှတ်ခဲ့တာကအစ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်ပြောပြနေတာတွေအဆုံး နည်းမျိုးစုံနဲ့လုံးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘာမှအရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။
အခုကမ္ဘာမှာ ဒုတိယစစ်အေးစစ်ပွဲပြန်စတော့မလားလို့ တွေးတောစရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ဖြူတော်ကပုဂ္ဂိုလ် များလည်း ခြေလှမ်းသစ်တွေလှမ်းဖို့ပြင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခါမှာ တရုတ်ပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးဟာ အိမ်ဖြူ တော်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုခံရတော့တာပါပဲ။ ဒါကိုဗမာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်တွေက “ငါတို့တရုတ်ဖဲချပ်ကစားနိုင်လို့ရတာ”လို့ လက်မ ထောင်ကောင်းထောင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ထောင်ချင်လည်းထောင်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကပွဲအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့ဖို့လို ပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီဆိုတာဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံပြီး ချမှတ်ကြတာဖြစ် ပါ တယ်။ ဟိုတန်ဘိုးအတွက်၊ ဒီဝါဒအတွက်ဆိုတာတွေဟာ လူကြားကောင်အောင်ပြောတာတွေသာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မှာ အရံလောက်သာဖြစ်တယ်လို့တောင်ဆိုရခက်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ တည်ငြိမ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာရေး အတွက် နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ လှုပ်ရှားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက ဗမာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီချမှတ်ရာမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားထက် ကိုယ့်အုပ်စုအာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ ကိုယ့်အုပ်စုအတွက် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ခံစား ရရေးအတွက် လုပ်နေကြတာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ၁၉၆၂ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဗမာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒဟာ လေးနက်တည်ကြည်မှုမရှိပဲ ဒီအကွေ့ ဒီတက်နဲ့လှော်၊ ဟိုအကွေ့ဟိုတက်နဲ့လှော်ဆိုသလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ဘုန်းကြီး ရူးနဲ့ လှေလူးလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟိုနိုင်ငံလည်းကြောက်ရ၊ ဒီနိုင်ငံလည်းမျက်နှာချိုသွေးရဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ရ ပါတယ်။
ဒါကိုပိုရှင်းအောင်ပြောရရင် ဗမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗမာပြည်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလွဲလို့ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်မှာ ဂုဏ်သရေရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့အနောက် ကွဲပြားနေတဲ့ စစ်အေးစစ်ပွဲကာလမှာကြားနေရေးဝါဒကို ကြေညာကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒီနေ့ကြံ့ဖွတ်အစိုးရအပါ စစ်အစိုး ရအဆက်ဆက်ဟာ မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒကို ဘာဖြစ်တယ်ရယ်လို့ ပီပီပြင်ပြင်မပြောကြပါဘူး)။ ဒါ့အပြင်အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ပြေပြေလည်လည်ဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီးတိုး(SEATO)၊ စင်တိုး(CENTO)စတဲ့ ပစ်မှတ်ရှိစွာဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာစစ်အုပ်တွေကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်ပေါက်လာ၊ ကိုယ့်ကိုပါဖို့မြှူဆွယ်ကြပေမဲ့လည်း ဘယ်အထဲမှ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဘန်ဒေါင်းညီလာခံ၊ အာရှအာဖရိကနိုင်ငံများ လှုပ်ရှားမှု၊ ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုစတာတွေမှာ အများလေးစားရတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ဦးသန့်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးခြယ်တင်မြှောက် လိုက်ကြတာဟာ အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ စတန့်ထွင်လာတော့အနောက်အုပ်စုက မျက်မှောင် ကုတ်ကြည့်တာခံရသလို ဆိုဗီယက်ကလည်းကိုယ့်လူလားလို့ ယူဆလာတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ယုန်ထင်ကြောင်ထင် ဖြစ်ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ သူတို့စစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်အတွင်းက ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအုပ်စု ရဲ့အစဉ်အလာမိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ဆီကိုသွားပြီး သူတို့ဟာသစ္စာရှိကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေ ဖြစ် ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလာထဲမှာပါ။ အဲဒီကနေပြန်လာတော့ သူဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ ၀ါရှင်တန်နဲ့အိုကေသွားပြီရယ်လို့ ဘ၀င်တမျိုးကိုင်လာပြီး တလျှောက်လုံးပြေလည်စွာဆက်ဆံခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည်နဲ့ပြဿနာ ဖန်တီးပါတော့တယ်။ တရုတ်ဗမာအရေးအခင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဗိုလ်နေ၀င်းဒေါသထွက်ပြီး ဘက် မလိုက်လှုပ်ရှားမှုထဲကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာ၊ ဒိနောက်မှာ တရုတ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားတောင်းပန်ခဲ့တာ စသဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ မှာ ဂယိမ်းဂယိုင်တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းဝင်ဖို့ မှန်တဲ့အချက်ရော မမှန်တဲ့အချက်တွေပါ တင်ပြပြီးဒေ၀ါလီခံပြလိုက်တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ သမိုင်းမှာအောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့၁၉၈၈ခုနှစ်မှာ ကိုယ့်အာဏာလက်မလွတ်ရေးအတွက် အသေအကြေလုံးပမ်းတဲ့ အခါကျတော့ နိုင်ငံတကာမှာအထီးကျန်လုံးလုံးဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့အခါဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအသစ်တခုဆီကိုဦးတည်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အင်အားကြီး မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကအစိုးရတွေဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာ၊ ချမ်းသာစွာနဲ့ဖြတ်ကူးဖို့လုံးပမ်းကြရပါမယ်။ လှိုင်းကြီးလေကြီးတွေကို ဖြတ်စရာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ကြံ့ဖွတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကကိုယ့်အာဏာတည်မြဲရေးအဓိက၊ နိုင်ငံ့အရေးဒုတိယလုပ်နေကြရင်တော့ အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အင်အားနဲ့မြေဇာပင်ဘ၀ရောက်လိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ မတွေးဝံ့စရာပါ။ အရှေ့အုပ်စုနဲ့ရင်းနှီးလိုက်၊ အနောက်အုပ်စုနဲ့ရင်းနှီးလိုက် လုပ်ခဲ့တဲ့ဆာဒမ် ဟူစိန်နဲ့ အီရတ်နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် အတွင်း ပြောကြားချက်များ
by Burma VJ Media Network on Friday, December 2, 2011 at 1:08am
Eleven Media Group Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် အတွင်း ပြောကြားချက်များကို ကောက်နုတ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေ့ အစိုးရသစ်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုအရ ကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပြီဆိုတာတွေ့ ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလိုအပ်တဲ့ အဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုယ်စား ကျွန်မက မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး ဖြေရှင်းရမယ့် အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားထောင်ကျော် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ ရလာမလဲဆိုတာတွေကို ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားတယ်။
မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခြေလှမ်းဟာ သန်းပေါင်း ၆၀ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လွတ်လပ်မှု ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ နေထိုင်ကြဖို့ အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတအိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှိန်ပျပျ တိုးတက်မှုတွေ တွေ့ရှိရပြီလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရတော့ မှိန်ပျပျအလင်းရောင်တွေဟာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှိန်ပျပျ အလင်းရောင်တွေဟာ လွတ်လပ်မှုအတွက် ထတောက်နိုင်ဖို့နဲ့ အနာဂတ် ကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာ မူတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ လာရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး မဟာမိတ်ထားရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာသမ္မတကို စောစောက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အမေရိကန် အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခြေလှမ်းနှင့်အတူ ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်။
မိုးရွာတုန်း ရေခံ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ ရှိပါတယ်။ မြန်မာသမ္မတနဲ့တွေ့တုန်းက သူပြောခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ မသိပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်တွေယူတဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ မရတဲ့ ခြေလှမ်းတွေလား၊ စီးပွားရေးကို ဖွင့်ပေးရင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေလား။ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ကျွန်မဖြေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေရမယ့်သူတွေက နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ စပါးကျီတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်အချိန်မှာ တခြား နိုင်ငံတွေက ဖြတ်ကျော်သွားပြီးတော့ အရှေ့အာရှဒေသမှာ အင်အားကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ မြန်မာအစိုးရအတွက် အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းရှိလာပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အရေးကြီးတာက အမေရိကန် ဒါမှမဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုနဲ့ ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးကို နိုင်ငံသားတွေ ခံစားနိုင်ဖို့ အတွက် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မှလည်း အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသမှာ အင်အားကြီးအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ အပြုသဘောဆောင် ဖြေကြားမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်မတို့အနေနဲ့လည်း အထောက်အကူပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
တစ်ချိန်က ဗီယက်နမ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အမေရိကန် စစ်မှုထမ်းတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေရေးဟာ အကျိုးပြုခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက Burma Road တည်ဆောက်စဉ်က ပျောက်ဆုံး ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်စစ်သားတွေ ပြန်လည်ရှာဖွေရေးမှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ခြေလှမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ဘက်က လုပ်ဆောင် သွားမှာတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာ-အမေရိကန် သံတမန်ရေးဆက်ဆံမှု တိုးတက်ဖို့နဲ့ သံအမတ်ချင်း ဖလှယ်ဖို့လည်း ပါဝင်ပါ တယ်။ နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုတွေကို တင်ပြနိုင်ဖို့လည်း လမ်း ကြောင်းတစ်ရပ် ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် ယုံကြည် ကိုးစားမှုရရှိဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ အစိုးရအတွင်းနဲ့ အစိုးရပြင်ပရှိ ခိုင်မာတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ စေတနာရှိသူတွေကို ထောက်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရွေးလမ်းမှားတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး တိုးတက်မှုတွေ မြင်လာတာကို အပြုသဘောဆောင် တုန့်ပြန့်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မယ့် အရာတွေဟာ မဲခေါင်ဒေသ အောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေ လေ့လာရာမှာ ပါဝင်နိုင်မှုနဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ADB စရှိတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် UNDP ရဲ့ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ကူညီနိုင်မယ့် ကိစ္စတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အရေးကြီးတာကတော့ အစိုးရတစ်ရပ်လုံးဟာ နျူကလီးယားလက်နက်မပြန့်ပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ သဘောတူညီမှုတွေကို လိုက်နာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားလိုက်နာပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ စစ်ရေးဆက်ဆံမှု ဖြတ်တောက်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သန္ဓိဌာန်ခိုင်မာမှုကိုလည်း ကျွန်မတို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုတွေကို အခုထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်အောင် မြှင့်တင်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။
အခုပြုလုပ်လာတဲ့ ကနဦးခြေလှမ်းတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ တင်းမာမှုတွေ လျော့ကျစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြာရှည်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ များစွာရှိပြီးတော့ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအမျိုးမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာသမ္မတကို ကျွန်မတိုက်တွန်းခဲ့တာကတော့ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကို လာရောက်တာကို ခွင့်ပြုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ တကယ်တန်းတော့ အကဲစမ်းမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခရဲ့ အခြေခံအ ကြောင်းတရားတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေအပြင် အခြားအကဲစမ်းမှုတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူကုန် ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အကြောင်းတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကို ပြန်လည်ရေးသားခဲ့တဲ့ အပြင် ဥပဒေတွေ ကိုလည်း ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀ဝကျော် လွှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ပြောခဲ့တာက အခုယူခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ အစဉ် အလာမရှိခဲ့ပေမယ့် အစဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေ လွှတ်ပေးတာက အားရစရာဖြစ်ပေမဲ့လို့ ၁၀ဝ၀ကျော် ကျန်ရှိနေပါ သေးတယ်။ ဒီကိစ္စကို ကျွန်မအနေနဲ့ သီးခြားပြောခဲ့သလို လူသိရှင်ကြားပြော လိုတာကတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ဘယ်သူကိုမှ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့် ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့် အကျဉ်းချထားခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အခုလွတ်လာပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ဖော်ဆောင်မှုမှာ ပါဝင်တာဟာ အားရစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့လည်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အားလုံးဟာ နိုင်ငံတဝမ်း ရုံးတွေကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရပြီးတော့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတပြီး ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
_ ဟီလာရီ ကလင်တန်
Credit to http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup
ကျုပ်လည်း ထပ်ဖြည့်ဦးမယ်..။ ဒေါ်ကလင်တန်က.. ၁သန်းခွဲပေးမယ်တဲ့ဗျ..။
Clinton offers US$1.2m to Myanmar civil society
Posted: 02 December 2011 1708 hrs
YANGON: US Secretary of State Hillary Clinton on Friday offered US$1.2 million in new aid aimed at civil society in Myanmar inabid to bolster reforms onalandmark visit to the long-isolated nation.
“We will takeanumber of steps to demonstrate our commitment to the people of this country,” said Clinton, who earlier Friday met civil society groups who have an uncertain role inacountry long dominated by the military.
A senior US official who accompanied Clinton said the new funding for the initiative would be US$1 million. Another US$200,000 will go to supporting landmine survivors and other victims of internal conflict, withagoal of raising that funding to US$800,000, the official said.
The United States, where foreign aid is often controversial in Congress, annually provides more than US$38 million to various programs related to Myanmar.
Clinton had also announced small steps on Thursday after visiting Myanmar’s isolated capital Naypyidaw, including supporting an international assessment of aid needs and resuming searches for missing US dead from World War II.
But the United States maintains sweeping sanctions on Myanmar. Clinton said she told the country’s leaders that the United States was assessing progress by the new leadership before it considers lifting sanctions.
“We will match action for action, and if there is enough progress, obviously we will be considering lifting sanctions,” Clinton said.
“But, as I said before, we are still at the very early stages of this dialogue,” Clinton said.
She said that even if the United States lifted sanctions, the effects might not be felt immediately unless Myanmar also undertakes economic reforms.
1.2 Million US$ ကို တသန်းခွဲတဲ့။
တသန်းခွဲ ဆိုရင် 1.5 Million ပေါ့နော်။
သူကြီး 0.3 Million စိုက်ရတော့မယ်နော်။
အဲဒါဆို သဂျီးရမဲ့ ကော်မရှင်နဲသွားမှာပေါ့ဗျ။။။။ တရုတ်ကြီးလို မဟုတ်ဘူး၊ အန်ကယ်ဆမ်က သိပ်တိကျတာ။ တောင်းရင်တခါထဲ အပြတ်တောင်းထား။ သဂျီးလုပ်စားနေဂျ တရုတ်ကြီးနဲ့ မတူဘူး…..။ ခွီးထဲမှ.. ငါတို့ကျတော့ ပွိုင့်မစို့မပို့လေးပေးပြီး သူကြတော့ စီအိုင်အေကနေ တနှစ်တနှစ် ဒေါ်လာသိန်းသန်းချီရတယ်။ :mad:
စီအိုင်အေက.. တဒေါ်လာပဲရကြည့်..။ ရွှေချပြီး.. ဒီမှာတင်ပေးမယ်…။
ဘတ်ဂျက်တွေ..လျှော့တော့မှာနော..။ အပြင်မှာပေးဝေနေတာတွေလျှော့ပြီး.. မြန်မာပြည်ထဲ တန်းထောက်ပံ့တာတွေလာမဲ့သဘောရှိတယ်..။
စီအိုင်အေက.. ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းလည်း.. မြန်မာပြည်အစိုးရ၀န်ထမ်း တွေ သင်တန်းပေးခေါ်တော့မယ်ထင်မိတာ…
မြန်မာ့တပ်မတော်လည်း.. ယူအက်စ်စစ်တပ်နဲ့ပြန်ချိပ်မိမှာမို့.. ဟိုးအရင်လို.. လေတပ်အေအိုမျက်မှန်တွေ.. ယူအက်စ်လုပ်ဂျာကင်တွေပြန်လာနိုင်တယ်..။
By the way , how did she address to our country ? Burma or Myanmar ? Thanks.
အရေးကြီးတဲ့..အစိုးရရုံးတချို့.. ပြောင်းသုံးနေတာ.. တော်တော်တောင်ကြာနေပြီ..။
စိတ်မကောင်းစရာက အမေရိကားရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုအားလုံးဟာ အမေရိကရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာ စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအပေါ် မြန်မာအစိုးရရဲ့ လိုက်လျောမှုအပေါ်မှာများစွာတည်နေတယ်ဆိုတာကိုသွားသတိပြုမိပါတယ်။ ဒါကလည်း သဘာဝကျတဲ့ကိစ္စမို့ မတရားဘူးလို့ပြောရခက်ပါတယ်။ သူ့အကျိုးတပြားသားမှမပါဘဲနဲ့တော့ ဘယ်သူက မေတ္တာလက်ဆောင် စေတနာရှိမလဲလေ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်နီးချင်း နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ရေးမျက်နှာစာတွေပေါ်မှာ ပါဝင်ပါတ်သက်နေမှုဟာ ဆုတ်သာတက်သာ အနေအထားမှာမို့ အမေရိကားရဲ့လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ပေးဘို့ သိပ်မခက်ခဲလှပါဘူး။
ယေဘူယျ အခြေအနေကိုကြည့်ရင်…အမေရိကား ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် world hostile countries တွေအပေါ် ထိန်းချုတ်ထားတဲ့ economic sanctions တွေအားလုံးဟာ အတော်ထိရောက်တဲ့ လက်နက်ဖြစ်သလို။ အဲ့ဒီလက်နက်ရြ့အကျိုးအာနိသင်ကို ရုတ်လျော့အားနဲစေမဲ့၊လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ sanction lift လုပ်မယ်မထင်ပါဘူး။
ဆိုတော့-sanction ရပ်သင့်မရပ်သင့် ဟာ ရင်နဲ့ကျောလို အလွန်နီးစပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲမြန်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။
sanction lift လုပ်သင့်သလား –
– လုပ်သင့်ပါတယ် = မြန်မာအစိုးရဘက်က တွေးရင်
– မလုပ်သင့်ပါ = အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအုပ်စုများအပါအ၀င် အမေရိကန်ရဲ့လက်ရှိအနေအထား
– မြန်မာလူထု = အဲ့ဒီအင်အားစု ကအဓိကအဆုံအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မြစ်ဆုံကိစ္စမှာသမ္မတ သိန်းစိန်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ရပ်တည်မှုကြောင့် လူထုက အစိုးရကို မကြုံစဖူး ထောက်ခံပြီးသူ့ဘက်ကရပ်တည်လိုက်တယ်။ ဒီနေရာမှာလဲ လူထုရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို အမေရိက ကမျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ တခုတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ွှ၇င်တုံကလို လူထုဆန္ဒပြုပွဲလို ကြံ့ဖွံ့လူထုအခမ်းအနားမျိုးတွေ လုပ်ပြလို့မရတော့ပါဘူဒ။ အကျိုးမရှိတဲ့အပြင် အကျိုးယုတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
“လူထု ရင်ထဲကထွက်လာတဲ့ အစိုးရဘက်မှာရပ်တည်တဲ့ရပ်တည်ချက်မျိူး” ကို တွေ့ရတဲ့နေ့…။ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒိနေ့က sanction lift လုပ်တဲ့နေပါဘဲဗျာ…။
ဘားမားလို့ သုံးနှုံးသွားတာလေးကို ကျမအနေနဲ့ သဘောကျမိပါတယ်..
ကျမတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသာလျှင်ဗုဒ္ဓလို့ (buddha)ခေါ်ယူသုံးစွဲထားကြတာပါ..
ကျန်တဲ့ဘာသာတိုင်းကဘုရားကို ကောင်းတဲ့အဓိပါယ်နဲ့ ( god )လို့ ခေါ်ယူသုံးစွဲပါတယ်..
ကျမတို့ ဗမာပြေကဗမာလူမျိုးတွေအများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်(burma)လို့ ခေါ်ယူသုံးစွဲသွားတာကို..
လူမျိုးတစ်စု ဘာသာတစ်ခုပဲရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုရင် ဟုတ်ပါ့ ။
ဒီတိုင်းပြည်က လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံနေတာလေ။
အစတောင် ကောင်းကောင်း မစနိုင်သေးခင်(တိုင်းရင်းစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး)
ဆန်ရှင်ရုပ်ဖို့ မရုပ်ဖို့က စစ်တပိုင်းအစိုးမရ အပေါ်မှာသာ မှီတည်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အောင် လုပ်ခဲ့တာလည်း သူတို့မို့ ပြန်ဖွင့်အောင် လုပ်ပြရမှာလည်း သူတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခဲ့တာ ၂၀၀၃ခုနှစ် ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ အပြီးမှ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ပိုင်းမှာက အရင်းအနှီးများ သွားမလုပ်နိုင်အောင် တားမြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပို့ကုန်တင်သွင်းမှု၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများ ကိုပါ အပြစ်ပေး အရေးယူခဲ့တာပါ။ ဒါတောင် အီရန်၊ လစ်ဗျား မြောက်ကိုရီးယားတို့ကို လုပ်ထားသလို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ပိတ်ဆို့မှု မလုပ်ရသေးဘူး။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ် သင်္ဘောများကို မြန်မာရေတပ်သေင်္ဘောများ အရေးနိမ့်ပြီးကထဲက စစ်အစိုးရရဲ့ စိုးရိမ်မှု ပိုလာတ်ာထင်ပါတယ်။ နောက်တော့ အမေရိကန်ရေတပ် ဝင်လာပြီ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ်နဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြလိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှု အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သားတယ်ထင်တယ်။ အဲဒီအချက်ကပဲ အမေရိကန်နဲ့ မဖြစ်မနေ ဆက်ဆံမှ ရတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ပြသနာဆိုတာ တကယ်တမ်း မြန်မာဖက်က စမှ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ဖြစ်စရာရှိတာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကတော့ ကုန်သွယ်ရေး အကျိုးအမြတ်လည်း ကြီးကြီးမားမားလည်း မရှိလို့ အမေရိကန်က ကြောထောက်နောက်ခံ ပေးမယ်ဆိုရင် နယ်စပ်စစ်ပွဲ သူတို့ဖက်က စနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အခြေခံလည်း ရှိထားတော့ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ကြီးများ ရှုံးရင် လည်အလှီးခံရမှာ တွေးမိကြမယ်။။။။။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် ခြေကုပ်မရခင် မျက်နှာချို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွေးလိုက်ကြဟန်တူပါတယ်။
ဆရာဖိုးသံချောင်းပြေသလို ဒုတိယစစ်အေးမှာ မြန်မာကြားမညှပ်ဖို့တော့ အခုလာမဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဘယ်လောက် အခြေခံကောင်းများ တည်ဆောက်နိုင်မလည်း အပေါ်မူတည် ပါလိမ့်မယ်။ ဆယ်နှစ်အချိန်ကာလလို့ ပြောရတာ တမျိုးသားလုံးရော နိုင်ငံတကာပါ လက်ခံနိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်း ကောင်းစွာရှိနိုင်မဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာကို ခန့်မှန်းပြောတာပါ။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်ရင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း မီဒီယာများ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်ရေး၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ အလွှာပေါင်းစုံ လက်ခံတဲ့ စနစ်တခု အသားကျရေး စတာတွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်နိုင်မှ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ဖို့ စိတ်အေးရပါမယ်။
အမျှော်အမြင်ကြီးပြီ သဘောထားပြည့်ဝသော အရည်အချင်းရှိတဲ့ အမေစုက ကုလားထိုင်လိုချင်တာမဟုတ်ဖူး တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်တာလို့ ပြောသွားပြီးပြီ ဆိုတော့
လူထုဘက်ကနေ အပြည့်အ၀ရပ်တည်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာ အရေးကိစ္စများကိုလည်း လမ်းမှန်ပေါ်လျှောက်နိုင်အောင် ရောက်သွားအောင် တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
တွေကိုအခုထိမလွှတ်ပေးဘဲနဲ့ Sanction ကိုလွှတ်ပေးဘို့မြှော်နေသူစစ်အစိုးရကိုဘယ်သူကလေးစားမှာလဲ။